Snapdragon 855 Plus: Qualcomm wuxuu cusbooneysiinayaa heerkiisa sare | Androidsis
Snapdragon 855 Plus: Cusboonaysiinta processor-ka Qualcomm
Qualcomm ayaa layaab leh adoo ku dhawaaqaya Snapdragon 855 Plus. Waa cusbooneysiin ah processor-kaaga hadda-dhamaadka sare, si rasmi ah loo soo bandhigay sanadkii hore. Waxaan ka heli awood weyn kiiskan, si processor u tag si aad u siiso waxqabad fiican marka aad ciyaareyso. Waa ujeeddada ugu weyn ee dayactirkan.
Snapdragon 855 Plus ayaa leh isla qaab dhismeedka iyo tirooyinka isku mid ah ka badan qaabkii asalka ahaa. Kaliya kiiskan, Qualcomm wuxuu doortay inuu soo bandhigo awood dheeri ah. Maaha markii ugu horreysay ee sumadda Mareykanka ay fuliso tallaabo la mid ah tan.
Isbedelada ugu muhiimsan ee Snapdragon 855 Plus waxaa lagu sameeyay xawaare. Qalabkan cusub wuxuu awood u leeyahay inuu gaaro xawaare sare. Tag hadda waxay leeyihiin xawaaraha ugu badan ee 2,96 GHz, marka loo eego 2,8 ee asalka ah. Sidoo kale GPU-gaagu wuxuu helayaa 15% awood dheeri ah kiiskan.
Labada isbadal waxaa lagu fuliyay telefoonno ciyaaro ah maskaxda ku hayno, sidaan awoodnay inaan ogaano. Sidaa darteed Qualcomm ayaa xiiso badan u leh qaybtan suuqan, oo sii kordheysa maanta, oo moodooyin cusub ay ku jiraan. Waxay awoodi doonaan inay isticmaalaan qashinkan wixii hadda ka dambeeya.
Xaqiiqdii, shirkaddu waxay rajeyneysaa taleefannada ugu horreeya inay adeegsadaan Snapdragon 855 Plus si ay u aadaan tuur qeybtaan labaad sanadka. Hada ma jiro wax sumad ah oo ku dhawaaqday. Laakiin waxay u badan tahay in taleefannada casriga ah ee ciyaaraha la sii daayo bilaha soo socda ay processor-ku ku dhex leeyihiin.
Si kastaba ha ahaatee, waan iska dhagaysan doonnaa si aan u aragno haddii ay jiraan noocyo adeegsada qalabkan. Inta soo hartay, Snapdragon 855 Plus nagama tegayo isbeddelada marka loo eego asalka. Xawaare sare, inkasta oo uu yahay isbeddel yar, haddana wuxuu hubaa inuu daneynayo isticmaaleyaal badan oo doonaya inay iibsadaan taleefannada casriga ah ee ciyaarta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Snapdragon 855 Plus: Cusboonaysiinta processor-ka Qualcomm
Huawei ayaa sanadka ku xiri kara iibka rikoorka
Shirkadda Huawei waxay qorsheyneysaa inay shaqada ka erido boqolaal ka mid ah shaqaalaheeda ku sugan Mareykanka